Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Ny fandrarana ny alikaola COVID-19 naroso dia miteraka fikorontanana eo amin'ireo Brita mosarena
Tsy hahazo ny pint-nao ianao na dia hisokatra aza ny trano fisotroana pub UK amin'ny volana aprily, hoy ny tati-baovao
Ny governemanta UK dia voalaza fa mieritreritra ny handrara ny alikaola rehefa misokatra ny trano fisotroana taorian'ny fanidiana tamin'ny volana aprily
Ny tatitra momba ny fandrarana 'alikaola' ho avy dia mandrangitra ny fahatezerana sy ny tsy finoana avy amin'ireo mpivarotra Pub any Angletera
Ny sasany any Brits dia miady hevitra fa ny trano fisotroana misokatra tsy misy alikaola dia tsara kokoa noho ny pub mihidy misy alikaola
Araka ny vaovao farany, ny governemantan'ny praiminisitra Boris Johnson dia mandinika ny politika izay mamela ny fisotroana ireo pisotro ihany aorian'ny hidina amin'ny volana aprily raha tsy mivarotra toaka izy ireo - ezaka iray hampiatoana ny fiparitahan'ny Covid-19 noho ny olona mamo izay tsy dia manara-dalàna firy amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina.
Io sosokevitra io dia avy hatrany dia niteraka tabataba mafy teo amin'ireo Brits tsy manan-kialofana, izay nilaza fa ny trano fisotroana tsy misy alikaola intsony dia tsy pub intsony.
“Pubs tsy misy alikaola? Inona no hevitra. Tena lavitra loatra ny fanaraha-mason'ny governemanta, ”, hetsi-panoherana Brexit, mpisoloky labiera mafana fo, Nigel Farage. Ny sasany kosa nampitaha ny trano fisotroana tsy misy alikaola amin'ny trondro sy fivarotana chip tsy misy chips, fivarotana akanjo tsy misy akanjo, na mpahay simia tsy misy fanafody.
Nasongadin'ny mpanolotsaina Greater Manchester Night Economy Sacha Lord fa trano fisotroan-toaka maro no “misafidy ny hangina fotsiny” raha omena ny ultimatum, raha toa kosa ny MEP avy any Midlands teo aloha, Roger Helmer, dia nanonona tononkira avy amin'ilay hiran'ny firenena Aostraliana 'A Pub With No Beer.'
Tsy ny rehetra no nanohitra an'io hevitra io, na izany aza, tamin'ny filazan'ny Brits sasany fa ny pub malalaka tsy misy alikaola dia tsara kokoa noho ny pub mihidy misy alikaola.
"Ny ankamaroany dia manomboka amin'ny booze, fa ho ahy, tsy izany ve, raha avela hihaona amin'ny hafa any ianao?" mpanao famotorana mpanao famotorana Lotty Earns. “Afaka misotro boozy ao an-tranonao ianao. Fa ny fandehanana any amin'ny [hafa] hafa, mipetraka miaraka amin'ny vady na roa ary manao Coke sns ary sakafo atoandro fisotroana dia toa aleoko. ”
Mpampiasa iray hafa no nibitsika hoe:
Raha heverina fa ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny Pub dia avy amin'ny zava-pisotro misy alikaola, ny fandraràna ny alikaola dia azo antoka fa hahatratra hatrany amin'ny tompona trano fisotroan-dronono aorian'ny herintaona misy ny fihemorana lehibe hafa, ao anatin'izany ny fanakatonana lava, ny isan'ny mpanjifa mahazo alalana, ny fotoana nikatona teo aloha, ny baikon'ny sakafo , ary tsy maintsy atao Covid-19 fanarahana tranga.